Ignaz Semmelweis: Ihe Kpatara Ọrịa Ọjọọ Nọ́ Na-egbu Ụmụ Nwaanyị Mụrụ Nwa n’Ụlọ Ọgwụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
O NWERE ike ịbụ na ọtụtụ ndị amaghị gbasara nwoke a a na-akpọ Ignaz Semmelweis, ma, ihe ndị o mere mgbe ọ nọ ndụ abaarala ọtụtụ ezinụlọ uru. A mụrụ ya na Họngarị, n’obodo a na-akpọbu Buda, nke a na-akpọzi Budapest. Ọ bụ dọkịta. Ọ gụchara akwụkwọ n’afọ 1844 na mahadum dị na Viena. N’afọ 1846, ọ malitere ịrụ ọrụ n’otu ụlọ ọgwụ a na-amụ nwa dị na Viena. Ma, e nwere otu mkpamkpa nọ na-akpa n’ụlọ ọgwụ ahụ. Ihe dị ka otu onye n’ime ụmụ nwaanyị asaa ọ bụla bịara ụlọ ọgwụ ahụ mụọ nwa na-ebute otu ọrịa nke na-emecha gbuo ya.
E mere nchọnchọ dị iche iche ka a chọpụta ihe na-akpata ọrịa ahụ, ma, mbọ niile a gbara kụrụ afọ n’ala. O nweghị ihe e ji n’aka a ga-eme ka ọ kwụsị. Otú ahụ ụmụ nwaanyị ndị ahụ si na-anwụ nọ na-enye Semmelweis nsogbu n’obi, ya ekpebie na ya ga-achọpụtarịrị ihe na-akpata ọrịa ahụ nakwa otú a ga-esi egbochi ya.
Ụlọ ọgwụ ahụ Semmelweis na-arụ ọrụ nwere ụzọ ebe abụọ a na-amụ nwa. O juru onye ọ bụla anya na ọtụtụ n’ime ụmụ nwaanyị mụrụ nwa n’ebe nke mbụ na-emecha nwụọ. Naanị ihe dị iche n’ụzọ ebe abụọ ahụ bụ na ọ bụ ụmụ akwụkwọ ndị dọkịta na-arụ n’ebe nke mbụ, ebe ụmụ akwụkwọ ndị na-aghọ nwa na-arụ n’ebe nke abụọ. Oleezi ihe mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị mụrụ nwa n’ebe nke mbụ ahụ ji emecha nwụọ? Semmelweis mere ọtụtụ nchọnchọ, meekwa ihe dị iche iche o chere e kwesịrị ime, ma, ihe na-ebenụ ka nọkwa na-ebe.
Ka ọ na-erule n’afọ 1847, Semmelweis chọpụtara ihe o yiri ya ka ọ̀ bụ ya na-egbu ụmụ nwaanyị ndị ahụ. Jakob Kolletschka, bụ́ enyi ya na-arụ n’otu ụlọ ọgwụ ahụ, nwụrụ. Ihe gburu ya bụ nje banyere n’ọbara ya. O butere nje ahụ mgbe o merụrụ ahụ́ oge ọ na-enyocha ahụ́ onye nwụrụ anwụ iji chọpụta otú onye ahụ si nwụọ. Mgbe Semmelweis na-enyocha ihe a chọpụtara gburu enyi ya ahụ, ọ chọpụtara na ihe gburu ya yiri ihe na-egbu ụmụ nwaanyị ndị ahụ. Ihe a mere ka o chewe na ọ ga-abụrịrị na e nwere nje a na-esi n’ozu bufee n’ahụ́ ụmụ nwaanyị dị ime nke na-akpata ọrịa ọjọọ ahụ na-egbu ha. Ọ ga-abụ na ndị na-ebunye ha nje ahụ n’amaghị ama bụ ndị dọkịta na-eme ha nyochachaa ozu, ha agawa ịghọ nwa ma ọ bụ gawa ile nwaanyị dị ime ahụ́. O nweghị ihe na-eme ọtụtụ ndị mụrụ nwa n’ebe nke abụọ ahụ ụmụ akwụkwọ na-aghọ nwa na-arụ n’ihi na ụmụ akwụkwọ ahụ anaghị enyocha ozu.
Semmelweis gwaziri ụmụ akwụkwọ ndị dọkịta ahụ niile na ha ga-ejirịrị ihe na-egbu nje kwọọ aka tupu ha agawa ibitụ nwaanyị dị ime aka. Ihe gbanwere, o nweghịzi ihe na-eme ọtụtụ ụmụ nwaanyị mụrụ nwa n’ebe ahụ ụmụ akwụkwọ dọkịta na-arụ.
Ignaz Semmelweis kwuru, sị: “Mkpa m bụ ịkwụsị ọrịa a na-emecha gbuo ụmụ nwaanyị ndị nọ n’ụlọ ọgwụ mụọ nwa, ha kwesịrị ịdịrị di ha na ụmụ ha ndụ.”
Ma, o nwere ndị ihe a bara uru Semmelweis chọpụtara na-adịchaghị mma n’obi. Ọga ya malitere inwere ya anyaụfụ, chụọkwa ya n’ọrụ n’ihi na ihe ahụ Semmelweis chọpụtara dị iche n’ihe yanwa kwuru kpatara ọrịa ahụ. Mgbe ọ laghachiri Họngarị, e mere ya onyeisi na ngalaba na-ahụ maka ụmụ nwaanyị dị ime n’ụlọ ọgwụ dị n’obodo a na-akpọ Pest. Mgbe ndị na-arụ n’ụlọ ọgwụ ahụ malitere ịkwọ aka otú ahụ o kwuru ka a na-akwọ, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na e nweghịzi nwaanyị mụrụ nwa n’ụlọ ọgwụ ahụ na-anwụ n’ihi ọrịa ọjọọ ahụ.
N’afọ 1861, Semmelweis bipụtara otu akwụkwọ o ji kọwaa ihe na-akpata ọrịa ahụ nakwa otú e si egbochi ya. Ọ dị mwute na ọtụtụ ndị ejighị ihe ahụ ọ chọpụtara kpọrọ ihe n’oge ahụ. N’ihi ya, ọrịa ahụ tara isi ọtụtụ ndị.
Semmelweis gbara mbọ hụ na ndị niile na-arụ n’ụlọ ọgwụ ọ na-elekọta na-akwọ aka tupu ha agawa ilebara ụmụ nwaanyị dị ime anya.—Ọ bụ Robert Thom sere ihe a
E mechara gụnye Semmelweis ná ndị kwuru ihe dị mkpa na-enye aka igbochi ọrịa. Ihe ndị ọ chọpụtara mere ka o doo anya na nje, bụ́ ihe anyị na-anaghị ahụ anya, nwere ike ịkpata ọrịa. Ihe ndị ahụ abaala uru karịa ọtụtụ nchọpụta ndị ọzọ e merela gbasara otú a ga-esi na-egbochi ọrịa. N’ihe karịrị puku afọ atọ tupu Semmelweis achọpụta ihe gbasara ịkwọ aka, Iwu Mozis ekwuolarị ihe onye metụrụ ozu aka kwesịrị ime. E mechakwara denye Iwu ahụ n’ime Baịbụl.
N’ime ihe dị ka narị afọ abụọ gara aga, ọtụtụ ụmụ nwaanyị nwụrụ na Yurop n’ihi ọrịa ọjọọ ha butere n’ebe ha mụrụ nwa.
E ji onyokomita chọpụta nje dị iche iche kemgbe afọ 1674, ma, a matachaghị ma hà na-akpata ọrịa. N’oge ochie, ndị dọkịta na-emekarị ha nyochachaa ozu, ha ejiri aka a na-akwọghị akwọ gawa ịghọ nwa.
Semmelweis chọpụtara na onye metụrụ ozu aka kwesịrị ibu ụzọ kwọọ aka tupu ya emetụ ihe ọzọ aka. Ihe a ọ chọpụtara nyere aka zọọ ọtụtụ ndị ndụ.
N’ihe dị ka puku afọ atọ na narị afọ isii gara aga, Iwu Mozis kwuru na onye ọ bụla metụrụ ozu aka ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo ụbọchị asaa. N’oge ahụ, onye ahụ ga-asa ahụ́ ya, saakwa ákwà ya mmiri. Ọ gaghịkwa aga ndị ọzọ nso.—Ọnụ Ọgụgụ 19:11-22.